We.com.mm - တနေကုန်သင်းပျံ့တဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်စေမဲ့နည်းလမ်းများ
တနေကုန်သင်းပျံ့တဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့လေးကို ပိုင်ဆိုင်စေမဲ့နည်းလမ်းများ
လူမမြင်လိုက်ရပေမဲ့ အနံ့လေးနဲ့ဖမ်းစားသွားတယ်ဆိုတာမျိုး ကြုံဖူးလား။ ဖြတ်လျှောက်သွားတာနဲ့ အနံ့သင်းသင်းလေး ကျန်ခဲ့တာမျိုး၊ ဝင်လာလိုက်တာနဲ့အနံ့လေးကြောင့် ဘယ်သူမှန်းတန်းသိတာမျိုးကို လူတိုင်းလိုချင်ကြတာပဲနော်။ ချွေးနံ့တထောင်းထောင်းနဲ့လူနား ဘယ်သူကပ်ချင်မှာလဲနော်။ ဒီလိုပူတဲ့ရာသီမှာ တနေကုန်မွှေးကြိုင်လန်းဆန်းနေဖို့ဆိုတာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သင်းရနံ့လေး ပျောက်မသွားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပြောပြချင်ပါတယ်။
အပြင်အနံ့ကောင်းချင်ရင် ကိုယ်တွင်းအနံ့ကိုအရင်ဂရုစိုက်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ မဆလာ၊ ဆူးပုတ်၊ အနီရောင်အသား၊ စတာတွေက ချွေးပေါက်လေးတွေကနေ့တဆင့် အနံ့စိမ့်ထွက်စေပါတယ်။ အသီးအနှံနဲ့အစေ့အဆံတွေကို စားပါ။ အပေါ်ယံဘယ်လောက်ပဲ အကောင်းစားရေမွှေးတွေသုံးသုံး ကိုယ်တွင်းထဲက အနံ့မကောင်းရင် အလကားပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရနံ့တွေလန်းဆန်းဖို့လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံတွေစားပါ။
၂. ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ရေမွှေးဆီတစ်စက်ထည့်ပါ
ရေမွှေးဆီဟာ အနံ့ကြာရှည်ခံဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ရွေးချယ်စရာအနံ့လေးတွေလည်း ရေမွှေးအရည်ထက်ပိုစုံပါတယ်။ ရေမွှေးဆီကို Lotion ထဲထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီး ထိရောက်ချင်ရင်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲထည့်လျှော်ပါ။ ဦးခေါင်းဆိုတော့ ပိုပြီးကြာရှည်ခံသလို တစ်စက်တည်းနဲ့ထိရောက်တဲ့ ရနံ့သင်းသင်းလေးကိုရမှာပါ။
၃. Travel Size ရေမွှေးလေးတွေအမြဲဆောင်ထားပါ
ကိုယ်သင်းရနံ့လေးတွေ ပျောက်သွားမှာစိုးရင် အိတ်ထဲမှာ Travel Size ဒါမှမဟုတ် အစမ်းသုံးတဲ့ ရေမွှေးပုလင်းငယ်လေးဆောင်ထားပါ။ ချစ်သူနဲ့ချိန်းတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးတကြီး အစည်းအဝေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေမချိုးထားဘူးဆိုရင်တောင် မွှေးရနံ့လေးသင်းနေစေဖို့ဒီလို travel size perfume လေးတွေက အသုံးဝင်ပါတယ်။
၄. အဝတ်အစားတွေကို Spray ဖြန်းပါ
အနွေးထည်တွေ၊ သားရေဂျာကင်တွေ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေလိုမျိုး အမြဲမလျှော်ဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို spray ဖြန်းပါ။ spray ဆိုတာက သာမန် ချည်ထည်တွေ၊ စွပ်ကျယ်တွေမှာ ကြာရှည်မခံပါဘူး။ ခဏခဏလျှော်နေတာဆိုတော့ ခဏခဏဖြန်းနေရတော့ အကုန်အကျများတာပေါ့။ သားရေဂျာကင်တွေ၊ အနွေးထည်တွေမှာသာ အနံ့စွဲတာပါ။ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအနံ့လေးဖြန်းထားတော့ အကြိုက်ဆုံး ဂျာကင်လေးတစ်ထည်ဖြစ်သွားတာပေါ့။
၅. ထိရောက်တဲ့နေရာတွေကို spray ဖြန်းပါ
တနေကုန်အနံ့သင်းနေဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ထိရောက်တဲ့နေရာတွေကို spray ဖြန်းပါ။ နေပူပြီး ရေမွှေးနံ့တွေပျောက်သွားပြီဆိုရင် spray ရဲ့အနံ့ကိုအကူအညီယူရပါတော့မယ်။ ဘယ်နေရာတွေက ထိရောက်တဲ့နေရာတွေလဲ။ လည်ပင်းအောက်၊ လက်ဖျံ၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ ခြေတကောက်ခွက် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့ခပ်ပြင်းပြင်းလေးစွဲနေချင်ရင်တော့ အဲဒီ့နေရာလေးတွေကို ဖြန်းပါ။ အနံ့ခပ်ပျော့ပျော့ပဲ လိုချင်တာဆိုရင်တော့ spray ကိုလေထဲဖြန်းလိုက်ပြီး အဲဒီ spray လေထဲ တိုးဝင်လိုက်ပါ။
၆. ရေမွှေးအောက်မှာ အဆီတစ်ခုခုလိမ်းပါ
အသားအရေခြောက်နေရင် ရေမွှေးကကြာရှည်မခံပါဘူး။ ရေမွှေးအနံ့လေး ကပ်နေဖို့အလွှာတစ်ခုလိုပါတယ်။ Spray ဖြန်းမဲ့ (သို့) ရေမွှေးစွတ်မဲ့အသားရေမှာ အဆီအနည်းငယ်လိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ကြာရှည်ခံတဲ့ ရနံ့ကိုရမှာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအဆီကိုလိမ်းနိုင်ပါတယ်။ Admin ကတော့ အုန်းဆီသုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အုန်းဆီက တကယ်ထိရောက်ပြီး အနံ့ကိုသိပ်သိပ်လေးဖြစ်စေပါတယ်။ ဗီတာမင် E အဆီလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
၇. ပါဝင်ပစ္စည်း တူညီတဲ့ product တွေသုံးပါ
ကိုယ်ပိုင်ရနံ့တစ်ခုနဲ့ တစ်နေကုန်သင်းပျံ့နေချင်ရင်တော့ သုံးမဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာ၊ Lotion၊ ရေမွှေး၊ spray တွေဟာ ပါဝင်ပစ္စည်းတူညီပြီး ရနံ့လည်း တူနေဖို့လိုပါတယ်။ product တွေကို အနံ့မျိုးစုံသုံးပြီး ဘာအနံ့မှမကျန်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ချင်လား၊ product တိုင်းကို အနံ့တစ်မျိုးတည်းသုံးပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ ရနံ့မျိုးထွက်ချင်လားဆိုတာတော့ သင့်ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရနံ့တစ်ခုအဖြစ်သုံးဖို့ရေမွှေးတစ်မျိုးရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင် တစ်သက်လုံးအတွက် အဲဒီရနံ့ကိုမှတ်ထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရနံ့ဆိုတာ ရွေးချယ်ရတော့ခက်တာပေါ့။ ရနံ့တွေကလည်း အားလုံးက သဘောကျချင်စရာတွေချည်းပဲဆိုတော့ အားလုံးထဲက ဘယ်အနံ့ကိုဝယ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရခက်တာပေါ့။ ဝယ်ပြီးမှ မကြိုက်တော့ရင်လည်း ဒုက္ခ။ ဒါကြောင့် ဝယ်မယ်ဆိုရင် test လုပ်တဲ့ ပုလင်း လေးတွေအရင်ဝယ်ပါ။ အနည်းဆုံး ၃မျိုးလောက်စမ်းဝယ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီရေမွှေးလေးတွေ စွတ်ပြီးတော့ ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်သူဆီက အကြံဉာဏ်တွေ တောင်းကြည့်ပါ။
Ref ; WomensArticle.com
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မှု ဖြစ်မလာနိုင်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း(၅)ချက်
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ Expired Date/Manufacture Date တွေကို ဖတ်နည်း
ရင်သားလေးတွေ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ လှပချင်တဲ့ ပျိုမေတို့ အတွက် အိမ်မှာ အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့အဆီ (၅) မျိုး
မိတ်ကပ်ပြင်ဖို့အချိန်မရတဲ့အခါမှာ ၅ မိနစ်နဲ့ပြီးအောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
ရင်သားသေးတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အတွက် အမြဲမိမိုက်နေစေမယ့် စတိုင် (၁၁) မျိုး
မြောက်ကိုရီးယားဗိုလ်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ အပိုင်းသစ်ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် ဆက်လက်ပြသမည်